निस्सन्देह मत्स्य पालन, यो एक आकर्षक व्यायाम छ। को Waterfront मा खर्च एक दिन, सकारात्मक भावना को एक क्याच वजन सँगै ल्याउनेछ। लुगा विशेष आवश्यकताहरु लागि। यो चिसो र चिस्यान देखि माझिहरु रक्षा गर्नुपर्छ। पानी मा जान सक्षम हुन, यो माछा मार्ने waders लागि डिजाइन गरिएको थियो। आफैलाई लागि सबै भन्दा राम्रो प्रतिलिपि कसरी चयन गर्न, त्यहाँ केही सिफारिसहरू छन्। खाता यसलाई लिएर तपाईं यो वस्त्र को एक साँच्चै राम्रो, छ upscale संस्करण चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी देखि अनुवाद Waders अर्थ "दलदल जूता।" यो आफ्नो वर्तमान Wading वेशभूषा को आधार बनाइएका थिए छ। सजिलो विशेषता द्वारा माछा मार्ने लागि वस्त्र को आधुनिक प्रजातिहरू। तिनीहरूले पार पानी र गर्मी भित्र राख्न छैन। तसर्थ, मछुवा को Waterfront मा समय खर्च गर्न धेरै सहज छ।
कस पनरोक जूता संग जोडिएको भिजेको पतलून सुट रही देखि अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न। पहिलो यस्तो लुगा युरोपेली माछा मार्ने प्रेमीहरूको प्रयोग गर्न थाले। यसलाई मूल मान्छे को रासायनिक सुरक्षाको लागि डिजाइन गरिएको थियो। चाँडै तथापि, त्यहाँ माछा मार्ने लागि विशेष waders थिए। एक outfit कसरी चयन गर्न, बुद्धिमानी प्राचीन माझिहरु थाहा छ। आफ्नो सल्लाह तपाईं सबै भन्दा राम्रो तरिका चयन गर्न हुनेछ।
मछुवा को माछा मार्ने भर बलियो supercooling गर्न subjected छैन। यो उपकरण तपाईं तल न्यानो लुगा लगाउने गर्न अनुमति दिन्छ। को माछा मार्ने सुक्खा रहन भर तिनीहरूले छन्।
सकारात्मक गुणहरू को एक विशाल संख्या माछा मार्ने लागि waders छ। (फोटो पोशाक शो, आदि) सबै भन्दा राम्रो विकल्प, शीघ्र विशेषज्ञहरु कसरी चयन गर्न। तिनीहरूले यी लुगा को प्रजाति सकारात्मक गुणहरू को एक नम्बर तर्क।
यदि जूता रबर वा परमवीर चक्र, र उच्च गुणवत्ता सामाग्री को बनेको छैन, यो उपकरण सक्षम छ "सास फेर्न।" यो उच्च भौतिक exertion मा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा, पसिना हुनेछ शरीर, त्यहाँ एउटा अप्रिय गन्ध छ।
आकार र anatomical कट को एक विस्तृत श्रृंखला आंकडा zabrodnik को प्रकार को लागि सबै भन्दा उपयुक्त चयन गर्न अनुमति दिन्छ। मोजा बायाँ र दायाँ खुट्टा देखि सम्मान संग सिलना छन्। माछा मार्ने प्रेमी stumbles र (गहिराई छैन धेरै ठूलो जहाँ) पानी मा पतन भने, यसलाई प्राप्त र सुक्खा रहन सक्षम हुनेछ।
यस्तो सूट को मुख्य लाभ को Angler लागि अवसर विस्तार गर्न छ। यो थकानको जोगिन सक्छौं, hypothermia। यो माछा मार्ने को धेरै गाह्रो ठाउँहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
wading सूट को निर्माण मा सामाग्री को तीन मुख्य प्रकार प्रयोग। यी जो आफ्नै विशिष्ट सुविधाहरू छ तीन मुख्य क्षेत्रहरु, छन्। माझिहरु कसरी माछा मार्ने लागि waders खरिद गर्न बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ, कसरी चयन गर्ने? यो परिधान (फोटो तल देखाइएको) को लाभ यो चिसो मौसम मा माछा मार्ने उत्साही लोकप्रिय बनाउन। जो बाट सुट wading बनेको छ सामाग्री, परमवीर चक्र, neoprene वा झिल्ली प्रकार बनेको छ।
पहिलो मामला मा, कपडे धेरै बहुलक पत्रहरू, र lavsan (नायलन) डोरियों समावेश छ। यो तपाईं क्यानभास थप सुदृढीकरण गर्न अनुमति दिन्छ। Polyurethane, लोचदार कपडा बनाउने, समग्र तस्वीर थपिएको छ जो। यो सामाग्री राम्रो पानी repellency प्रदर्शन।
अपेक्षाकृत यस क्षेत्रमा नयाँ भएको neoprene सामाग्री छ। यो फोम chloroprene रबर (रबर)। यस्तो gidronepronitsaem सुट मात्र, तर पनि तापमान अचाक्ली प्रतिरोधी छ। यसलाई कुनै पनि मौसममा आरामदायक मछुवा।
वैज्ञानिकहरूले गर्न झिल्ली सामाग्री को विकास मा वातावरण मा मानव छाला बाट अपहरण वाष्पीकरण tasked थियो, तर सुट भित्र चिस्यान यसलाई बाहिर पारित गर्न छैन। परिणाम साँच्चै शानदार थियो। यो डराएको छैन गर्दा लुगा, सक्रिय सार्न अनुमति दिन्छ।
सामाग्री कसरी चयन गर्ने?
भौतिक मछुवा ध्यान छ जो पहिलो प्यारामिटर छ। के अवस्था माछा मार्ने waders लागि उपयुक्त हो लागि कसरी चयन गर्ने? निम्न मापदण्ड यहाँ। यो सबै माछा मार्ने, मौसम को प्रकार र मछुवा को गतिशीलता मा निर्भर गर्दछ।
तपाईं पक्रने गर्दा, पीवीसी को उपयुक्त सुट (विशेष गरी न्यानो महिनामा) लामो पदहरू बनाउनको लागि योजना छैन भने गर्छन्। चरम गर्मी वा hypothermia मा, त्यो बेचैनी यसका पहनने रक्षा गर्न सक्षम हुने छैन।
एक मछुवा चिसो पानी मा लामो समय हो भने, पोखरी को बैंक मा चिसो मौसम मा एक सानो उत्प्रेरित, यो zabrodnik neoprene अब अनुरूप हुनेछ। उहाँले सुट भित्र चिसो गरौं गर्दैन। तथापि, न्यानो मौसम वा सक्रिय माछा मार्ने विधि समयमा, यो सामाग्री असुविधाको कारण हुनेछ। उहाँले तेजी सार्न सुरु यदि मछुवा देखि, सात बर्तन आउनुहोस्।
झिल्ली waders "सास फेर्न" गर्न सक्षम छन्। तसर्थ, माछा मार्ने कुनै प्रकारको लागि तिनीहरूले मनपरेको। तिनीहरूले चिसो र न्यानो मौसम मा पहना गर्न सकिन्छ।
म waders किन्न गर्नुपर्छ?
त्यहाँ माछा मार्ने लागि waders खरिद गर्न चाहे बारेमा विवादित राय छन्। माथि छलफल सामाग्री कसरी चयन गर्न। आफ्नो zabrodnika अनुकूल अवस्था हरेक प्रकार को लागि। तथापि, कारक को एक नम्बर खातामा लग्नु गर्नुपर्छ।
यस्तो सुट अझै पनि खरीद लायक छ भन्ने तथ्यलाई पक्षमा, यसको विशेषताहरु को एक नम्बर भन्छन्। चिस्यान ingress विरुद्ध सुरक्षा बाहेक, यो उच्च बल र स्थायित्व द्वारा विशेषता छ। पोशाक जूता मा एकीकृत। उत्पादन को अनुरक्षणीयता राम्रो छ। यसको लागत एकदम कम छ।
टिप्पणी, तर, त्यो zabrodnik सुविधाहरू एक नम्बर छ। आफ्नो सामान राम्रो हार्ड र भारी छ। समय, भौतिक दल्नु, प्वालहरू देखिन्छन्। एकीकृत ड्राई जूता एकदम कठिन कार्य बनाउँछ।
तर यी सबै कमजोरीको लाभ zabrodnika को पृष्ठभूमि विरुद्ध पीला।
लोकप्रिय मोडेल को समीक्षा
आज, धेरै निर्माताहरु माछा मार्ने लागि waders विभिन्न प्रस्ताव। कसरी छनौट गर्न मद्दत विशेषज्ञ सल्लाह को सही प्रकारको (मोडेल को अवलोकन विशेष ध्यान आवश्यक)। सस्ता उत्पादनहरु परमवीर चक्र बनेको छन्। आफ्नो मूल्य 2000-4000 rubles को दायरा छ। Neoprene प्रजातिहरू एक उच्च मूल्य 4,000-12,000 rubles छ। को झिल्ली ऊतक को पोशाक 8000-15000 rubles खर्च हुनेछ।
तपाईं तालाब मा छोटो outing योजना छ भने, तपाईं उत्पादनहरु को सस्तो प्रजातिहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। तर चिसो अवस्था गर्न लामो समयसम्म जोखिम, नदी मा एक सक्रिय संक्रमण अधिक महंगा albeit रुचि हुनु पर्छ, तर साँच्चै आरामदायी झिल्ली सुट।
यो कपडा Waders आज धेरै लोकप्रिय छन्। यस्तो Snowbee प्रेस्टिज (संयुक्त राज्य), Shimano Biocraft (जापान), Aquaz (दक्षिण कोरिया), दृष्टि Gillie (फिनल्याण्ड), Simms गोर-टेक्स XCR (संयुक्त राज्य अमेरिका) को रूपमा यसलाई मोडेल।
यो मात्र आज लोकप्रिय छ, तर पनि गुणात्मक उदाहरण zabrodnikov।
एक सुट चयन यसको विशेषताहरु केही ध्यान गर्नुपर्छ प्रक्रिया मा। विशेषज्ञहरु जब माछा मार्ने लागि waders छनौट खोज्न के सुझाव दिन। आकार कसरी चयन गर्न, प्रजाति, कट, अधिक विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ।
गुणस्तरीय उत्पादन मछुवा सुविधा मा। मानिस साँच्चै आरामदायी थियो भनेर कट गर्नुपर्छ। आकार न्यानो लुगा धारण गर्न सक्षम हुन थोडा बढी हुनुपर्छ। तर, यो पनि विशाल हुनु हुँदैन। यो एकदम सेवा जीवन कम गर्नेछ।
यो जसको जुत्ता जूता को रूप मा छ waders, खरिद गर्न लायक छ। तिनीहरूले हिंड्न थप सुविधाजनक छन्। अपरेटिङ अवस्था सम्बन्धित उचाइ zabrodnikov। यो मछुवा गरेको प्राथमिकताहरू मा निर्भर गर्दछ।
यस्तो पानी प्रतिरोध र पोशाक को चिस्यान मोड रूपमा ऊतक मापदण्डहरु को गुण, पासपोर्ट मा संकेत गर्नुभयो। तिनीहरूले पनि खरीद गर्दा ध्यान गर्नुपर्छ।
धेरै माझिहरु माछा मार्ने लागि सबैभन्दा विश्वसनीय waders कसरी पाउन सोध्दै हुनुहुन्छ, कसरी चयन गर्ने? मोडेल, साथै मुख्य मुद्दाहरू को समीक्षा गर्दा खरीद तपाईं सही प्रकारको छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। तर, सुट सही संचालित हुनुपर्छ।
उसलाई माछा पकडने जब माटो र बालुवा बन्द धुन। यसबाहेक, यो राम्रो सुक्खामा आवश्यक छ। मनतातो पानीमा एक दुई पटक वर्ष भन्दा कुनै प्राय तिनीहरूलाई मेटाउन। सानो punctures, कटौती तुरुन्तै (एक विशेष गोंद प्रयोग) हटाइएका छन्। , को पट्टियाँ उसलाई झुन्डिएको ठाडो स्थिति उत्पादन राख्नुहोस्।
vedersy अन्तर्गत वस्त्र
माछा मार्ने मा रहन को आराम वृद्धि गर्न, यो माछा मार्ने लागि waders अन्तर्गत सही लुगा चयन गर्न आवश्यक छ। कुरा कसरी चयन गर्न, विशेषज्ञहरु सल्लाह। सही अंडरवियर तल थकित हुन (चिसो मौसम मा)। यो बरफ माछा मार्ने भने, तपाईं तल ऊन प्यान्ट लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ। मोजा anatomically आकारको हुनुपर्छ। तिनीहरूले ऊन वा लाइक्रा बनेको छन्।
चयन र सञ्चालनको सबै intricacies थाह, सबैलाई माछा मार्ने लागि सबै भन्दा राम्रो waders बाहिर छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। सही मोडेल कसरी चयन गर्न, दयालु, विशेषज्ञ सल्लाह मदत। माछा मार्ने त सबै भन्दा सहज र फलदायी हुनेछ।
को खार्किव क्षेत्रमा मत्स्य पालन: सबै भन्दा राम्रो ठाउँ
Rotan पहिलो बरफ पक्रने। rotan जाडो पक्रने लागि tackles
आफ्नै हातले माछा पकडने लागि गम - माछा मार्ने को शस्त्रागार मा एक उपयोगी कुरा
फेब्रुअरी अड्डा पक्रने। को हिउँदमा अड्डा लागि निपटने र चारा माछा मार्ने
माछा मार्ने नाउ: मुख्य विशेषताहरु
कहानिहरु: उमेर को बुद्धि माध्यम
"Django Unchained": अभिनेता, भूमिकाको, रोचक तथ्य
लक्षण र pancreatitis को उपचार
फाइबर ओप्टिक केबलहरू जडान गर्न ओप्टिकल युग्मलर
कीव मा स्मारक Cheka: इतिहास, वर्णन, समाप्तिन्यू। गुप्त प्रहरी को हुन्?
बारलाइनk (पालक बोर्ड): विशेषताहरू र समीक्षाहरू
नाम पुडल Malvina र Pinocchio को साहसिक मा आफ्नो भूमिका के थियो?